Isbarbardhigga BQ Aquaris E10 vs BQ Edison 3 | Androidsis
Isbarbardhiga BQ Aquaris E10 vs BQ Edison 3
BQ Aquaris E10 iyo Edison 3 labaduba waa laba kiniini oo la bilaabay bartamihii sanadkii 2014-kii oo ay soo saartay shirkadda Spanishka ah ee BQ, waana laba moodel oo ku habboon in laga faa'iideysto waxyaabo badan oo warbaahin ah ama ka baaraan degaya shabakadda, gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo qiimahooda hadda.
Mawduucan waxaan ku sameyn doonnaa isbarbardhig kooban oo u dhexeeya kuwan Kiniiniyada 10 inji ah, Halka aan sidoo kale isku dayi doono inaan aragno waxa ay yihiin dhibcaha iyo ka soo horjeedka mid kasta oo iyaga ka mid ah. Ha ka maqnaan falanqaynta isbarbardhiga markaa
1 Naqshadeynta iyo muujinta
2 Qalabka iyo waxqabadka
4 Batariga iyo isku xirnaanta
5 Qiimaha iyo gabagabada
6 Faahfaahinta farsamada
Naqshadeynta iyo muujinta
Dhinaca naqshadaynta, BQ Aquaris E10 wuxuu leeyahay shaashad 10.1-inji ah oo IPS ah iyo xallinta Full HD 1920 x 1200, iyo sidoo kale cufnaan dhan 225 pixels halkii inji. Dhinaca kale, kiniinku wuxuu leeyahay miisaan dhan 570 garaam iyo dhumucdiisuna tahay 9 mm, halka dhererkiisu yahay 165 mm dhererkiisuna yahay 243.50 mm.
Marka la barbardhigo, ah BQ Edison 3 Waxay keeneysaa shaashad 10.1-inji ah oo IPS ah, in kasta oo ay xaaladdan hoos u dhigayso xallinta 1280 x 800 pixels, oo leh cufnaan dhan 150 pixels halkii inji, iyadoo ku jirta khasaare marka loo eego E10. Dhanka cabirka, BQ Edison 3 culeyskiisu waa 625 garaam, dhumucdiisuna waa 9.70 mm, halka dhererkeedu yahay 174.7 mm dhererkiisuna yahay 256 mm.
Qalabka iyo waxqabadka
Qeybta qalabka, ka BQ Aquaris E10 Waxay ku faantaa processor 6592-core MediaTek MT8 ah oo ku shaqeeya 1.70 GHz. Dhanka kale, GPU waa Mali-450. Sidoo kale, kiniinku wuxuu keenayaa 2 GB oo RAM ah iyo xusuusta gudaha ee 16 GB oo leh suurtagalnimada ballaarinta iyada oo loo marayo microSD (illaa 32 GB).
Qeybtaan, BQ Edison 3 ayaa mar kale ka liidata Aquaris E10, maadaama ay kujirto processor Cortex A7 oo leh kaliya 4 koronto, oo ku shaqeeya xawaare dhan 1.30 GHz waxaana taageera Mali-400 GPU. Sidoo kale, RAM-ka Edison 3 waa 2 GB, sida E10-ka, halka xasuusta gudaha ay tahay 32 GB oo ay suuragal tahay in lagu ballaariyo iyada oo loo marayo microSD ilaa 32 GB ah.
Dekedaha iyo badhannada BQ Edison 3
Sida la arki karo, in kastoo Aquaris E10 wuxuu leeyahay processor xawaare sare leh oo sareeya, BQ Edison 3 wuxuu ku kasbanayaa dhibco qaybta kaydintamaadaama ay laba jeer soo kordhiso xusuusta.
BQ Aquaris E10 waxaan kaheleynaa 8 megapixel kamarad weyn oo leh Dual Flash iyo duubista fiidiyowga ee tayada 1080p, halka kamaradeeda hore ay leedahay qaraar dhan 5 megapixels.
Dhinaca kale, BQ Edison 3 wuxuu isku daraa a 5 megapixel camera gadaal ah oo aan lahayn Flash, iyo kamaradeeda hore waxay bixisaa xalka 2 megapixels.
Batariga iyo isku xirnaanta
Qeybtaan, BQ Aquaris E10 ayaa mar kale ku jirta boos ka sarreeya marka loo eego Edison 3, maadaama ay ku faaneyso batari 8680mAh ah marka la barbar dhigo batroolka 7000mAh ee Edison 3.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, BQ Aquaris E10 wuxuu ku darayaa dareemayaasha ama modululada soo socda: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 b / g / n, microUSB 2.0.
Marka laga hadlayo isku xirnaanta, BQ Edison 3 waxaan ka helaynaa dareemayaasha soo socda ama modullada: Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n, micro SIM slot, waafaqsanaanta shabakadaha 3G iyo dekedda microUSB 2.0.
Sida aad u jeeddo, BQ Edison 3 (nooca 3G) wuxuu ka roon yahay Aquaris E10 markay tahay isku xirnaanta, tan iyo marka laga reebo haysashada taageerada micro SIM iyo shabakadaha 3G, waxay sidoo kale kudareysaa module Wi-Fi dhaqso badan.
Qiimaha iyo gabagabada
BQ Aquaris E10 iyo BQ Edison 3 labaduba waxay leeyihiin qiimayaal isku mid ah maaddaama labada kiniinba ay bixiyaan faa'iidooyin iyo qasaarooyin gaar ah oo ay tahay inaad tixgeliso markaad dooraneyso, gaar ahaan tixgelinta waxa adiga kuugu muhiimsan. Tusaale ahaan, Edison 3 wuxuu bixiyaa meel badan oo keyd ah, 3G taageero iyo xawaare dheeri ah inta lagu jiro isku xirnaanta bilaa-waayirka ah, halka BQ Aquaris E10 uu keenayo shaashad qaraar sare iyo processor ka awood badan.
Hoos waxaan kaaga tageynaa miis isbarbardhigaya oo soo bandhigaya tilmaamaha farsamo ee ugu muhiimsan labadan kiniin.
Iibso BQ Edison 3 adoo gujinaya halkan.
Soo iibso BQ Aquaris E10 adoo gujinaya halkan.
Marca BQ BQ
Nidaamka hawlgalka Android 4.4 KitKat Android 4.4 KitKat
Screen 10.1 inji IPS LCD 10.1 inji IPS LCD
Xallinta 1920 x 1200 (225 pixels halkii inji) 1280 x 800 (150 ppi)
Cámara trasera 8 megapixels leh Dual Flash 5 megapixels bilaa flash
Kaameerada hore 5 megapixels 2 megapixels
Gacaliye MediaTek MT6592 8-xudun 1.70GHz 7GHz 4-xudunta Cortex A1.3
Graphics Mali-xnumx Mali-xnumx
Kaydinta 16 GB 32 GB
Ballaarinta microSD ilaa 32 GB microSD ilaa 32 GB
Batariga 8680mAh 7000mAh
Qalabka dhageysiga Sí Sí
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 4.0 - microUSB 2.0 - Wi-Fi 802.11 b / g / n Bluetooth 4.0 - 3G taageero - Wi-Fi 802.11 a / b / g / n
Cabbirada X x 243.5 165 9 mm X x 256 174.70 9.70 mm
Peso 570 g 625 g
Qiimaha asalka ah 270 euros 260 euros
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Bq » Isbarbardhiga BQ Aquaris E10 vs BQ Edison 3
6 taleefannada casriga ah oo leh beytar weyn oo ah xulasho iibsi wanaagsan